ကားတိုင်တော်အကြောင်းဟောပြောခြင်း | The Preaching of the Cross | Real Conversion
တရားဒေသနာကို Dr. R. L. Hymers, Jr. က ရေးသားပြီး
မေလ ( ၂၇ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်
Rev. John Samuel Cagan က ဟောကြားသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌ လက် ဝါးကပ်တိုင်တော်တရားသည် မိုက်သောတရားဖြစ်၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သော ငါတို့၌ ထိုတရားသည် ဘု ရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။” (၁ ကော ၁း ၁၈ )
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာ Hymers က ဤအကြောင်းကို ခြောက် နှစ်ခန့်ဟောပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုဟောပြောသော တရားဟောချက်ကို ရေးသားခဲ့ပါ သည်။ သူရေးသားသည့်စာမူပေါင်းများစွာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝပ်ဆိုက်ဒ်တွင်ရှိပါသည်။ ထိုစာမူများ ကို ဘာသာစကားပေါင်း ၃၈ မျိုးဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုကြပါသည်။ တရားဒေသနာ ဗွီဒီယိုနှင့်မူ ရင်းစာမူများသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၂၂၁ နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ သင်းအုပ် များက သူ၏တရားဒေသနာကို ဟောပြောနေကြသည်။ ဒေါက်တာ Hymers သည် တကယ့် ထူးချွန်သည့်တရားဟောဆရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူ၏အတွေ့အကြုံများဖြင့် ဘာကိုဟောရ မလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ပါသည်။
“အဘယ့်ကြောင့်ခက်ခဲနေရသနည်း” ဟု သင်မေးကောင်းမေးနိုင်သည်။ ခက်ခဲကြမ်း တမ်းရသည်အကြောင်းကို ကျွန်တော်ပြောပြပါမည်။ တနင်္ဂနွေဝတ်ပြုအစည်းအဝေးတွင် ခရစ် ယာန်မဟုတ်သူ များစွာရှိနိုင်သည်။ အချို့ အချို့သောသူများသည် ဗုဒဘာသာနောက်ခံရှိသူ များဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့မှာ ကာသိုလိတ်အသင်းတော် သို့မဟုတ် နယူဧဝံဂေလိအသင်းတော်၊ ပုံမှန်ခရစ်ယာန်များ၊ နှင့် နာမည်ဖြင့် ခရစ်ယာန်ဖြစ်သူများ စသဖြင့် မတူညီသော နောက်ခံများ ရှိနိုင်ကြသည်။ ဘာသာရေးနောက်ခံသမိုင်းလုံးဝ မရှိသူများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့မှာ အ သင်းတော်၌ ရှိကြသော်လည်း ကယ်တင်ခြင်းမရကြပေ။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် သမ္မာ ကျမ်းစာကို သိရှိကြသော်လည်း အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်းကို လုံးဝ မခံစားခဲ့ကြပေ။ အားလုံး၌ မတူညီသော အချက်တစ်ခုမှာ သူတို့သည် ယေရှုခရစ်၌ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲသူများ မ ဟုတ်ကြပေ။
တနင်္ဂနွေဝတ်ပြုစည်းဝေး၌လည်း တရားဒေသနာသည် တစ်နာရီ သို့မဟုတ် ထိုထက် နည်းပါးသည့်အချိန်ကာလကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။ ထိုသို့ နည်းပါးသောအချိန်နာရီတွင် သင် သည် ဘာသာတရားနှင့်ပတ်သက်သည့် သင့်အတွေးအခေါ်မှန်သမျှကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့် အရာကို ပြောရမည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် သမ္မာတရားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ မှန်ကန် သောအရာဖြစ်သည်ကို လုပ်ဆောင်ရမည်။ စစ်မှန်သော သမ္မာတရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ တရား ဒေသနာသည် သင်နှင့်သဘောထားတိုက်ဆိုင်ပြီး သင်ထင်မြင်ယူဆချက်အားလုံးကို ပြောင်း လဲစေနိုင်ရမည်။ မှားယွင်းသည့်အယူအဆများကို စွန့်ပစ်ပြီး အပြစ်ကိုသိမြင်ကာ ခရစ်တော်ထံ သို့ပြောင်းလဲလာနိုင်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိရမည်။ ယင်းသည် ကြီးမားသည့်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်အားဖြင့် တစ်နာရီခန့်သာရှိသည်။ ကျွန်တော်ဟောပြောမည့်အ ကြောင်းအရာသည် ရိုးစင်းသော ဧဝံဂေလိတရားဒေသနာဖြစ်ပြီး ထိုတရားဒေသနာကိုဟော ပြောနိုင်ဖို့ တွေးတောဆင်ခြင်မှု၊ ဆုတောင်းခြင်းများစွာ ပေးဆပ်ရသည်။
ကျွန်တော်တို့၏အခြေပြုကျမ်းသည် ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ် ကိုဟောပြောရာတွင် သင့်အတွက် အကူအညီဖြစ်ရန်၊ အနည်းဆုံး သင်အိမ်ပြန်သောအခါ မဆိုစလောက်လေး စိတ်ထဲမှတ်မိနေစေဖို့ရန် ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါသည်။ ယနေ့ ပြင်ဆင် လာသည့် တရားဒေသနာက သခင်ယေရှုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်အား တွေးတော စေမည်ဟုလည်း မျှော်လင့်မိသည်။ အသက်ဝိညာဉ်၏ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအတွက် လုပ် ဆောင်ပေးသမျှသောအရာအတွက်လည်း တွေးတောစေနိုင်ပါသည်။ ၁ ကော ၁း ၁၈ ထဲက ကျမ်းပိုဒ်ကို ဤနေရာတွင် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ ကျွန်တော်ဖတ်နေစဉ် အားလုံး နာထောင်ကြပါစို့။
“အကြောင်းမူကား၊ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌ လက်ဝါးကပ် တိုင်တော်တရားသည် မိုက်သောတရားဖြစ်၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သော ငါတို့၌ ထိုတရားသည် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော် ဖြစ်၏။” ( ၁ ကော ၁း ၁၈ )
တရားဒေသနာတွင် အဓိကအချက် သုံးချက် ပါရှိသည်။ ( ၁ ) ကားတိုင်တော်တရားအကြောင်း ဟောပြောခြင်း၊ ( ၂ ) ရှုံးဆုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့အဖို့ လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်းဟော ပြောခြင်းသည် မိုက်မဲခြင်းတရားဖြစ်ခြင်း၊ ( ၃ ) ခိုင်မာသောအသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ လက်ဝါးကပ် တိုင်တရားအကြောင်းဟောပြောခြင်းတစ်ခုတည်းသည် မလုံလောက်ပါ၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၁။	ပထမအချက်၊ ကားတိုင်တော်တရားအကြောင်း ဟောပြောခြင်း
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်းဟောပြောခြင်း”ဟူသော စ ကားလုံးများကို ပြောဆိုရာတွင် မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုပါသနည်း။ “လက်ဝါးကပ်တိုင်အ ကြောင်းဟောပြောခြင်း” ဟူသော စကားလုံးတွင် အဓိက အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါသည်။ ထို စကားလုံးများတွင် တည်ထားသော အဓိကကျသည့် သမ္မာတရားတစ်ခုရှိသည်ဟု ဆိုလိုပါ သည်။ စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိတရားတစ်ခုတည်းရှိသည်ဟု ဆိုလိုသတည်း။ ဘုရားတစ်ဆူ တည်းသာရှိသည်အတိုင်း ဧဝံဂေလိတရားလည်း တစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ ကယ်တင်ရှင် လည်း ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော တစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ “ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောခြင်း” သည် ကျွန်တော့်အတွက်မှန်ကန်သော်လည်း သင့်အတွက် မှားယွင်းနိုင်သည်ဟူသော ခေတ် သစ်အလွန်အယူအဆကို ကျွနု်ုပ်တို့က ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိပါ။ ခေတ်သစ်အလွန်အယူအ ဆရှိသူများက “၄င်းသည် သင့်အတွက်အမှန်တရားဖြစ်သည်။ သင့်အတွက် မှန်ကန်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်မူ မှန်ကန်သောအရာမဟုတ်” ဟု ပြောချင်ပြောနိုင်ကြပါသည်။ ဤသည်မှာ ခေတ်သစ်အလွန်နှစ်ဆသောဆွေးနွေးပြောဆိုမှုဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်းကို ပြောသောအခါ ရည်မှန်းချက်နှင့်သက်ဆိုင်သော အမှန်တရား ကို ပြောဆိုသည်။ သင်တို့အယောက်စီတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အမှန်တရားဖြစ်ရမည်။ သင် က ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ မှန်ကန်မှုရှိနေသော သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ထိုသို့ပင် ပြောဆိုနေပါသည်။ မှန်ကန်သည်ဟု သင်ထင် မြင်သည်ဖြစ်စေ၊ မထင်မြင်သည်ဖြစ်စေ မှန်ကန်လျက်ရှိသည်။ ဦးတည်ချက်ရှိသော သမ္မာတ ရားပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စိတ်နှလုံးက ယင်း၏အရေးကြီးသောအချက်များကို လက် ဆုပ်လက်ကိုင် ထားနိုင်သည်ဖြစ်စေ မထားနိုင်သည်ဖြစ်စေ မှန်ကန်မြဲ မှန်ကန်ဆဲဖြစ်သည်ဟူ ဆိုလိုသည်။
နောက်တစ်ချက်မှာ “လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်း ဟောပြောခြင်း” ကို သမ္မာကျမ်းစာ မိန့်တော်မူသည့်အရာ၌သာမက၊ သမိုင်းအချက်အလက်၌လည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုသမိုင်း အချက်အလက်ဟုဆိုရာတွင် ယေရှုခရစ်သည် သင့်အပြစ်အတွက် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရ သည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သင့်အပြစ်အလုံးစုံကို မိမိအပေါ်၌တင်သောအခါ ဂေသရှေမာန် ဥယျာဉ်၌ နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံစားနေရသည်ဟူ၍လည်းကောင်း စသည့်အချက်များဖြစ်ပါ သည်။ ပိလတ်မင်း၏ရုံးတော်၌ သေလုမျှောပါးအထိ ရိုက်နှက်ကြသောအခါ ချောက်ချားဖွယ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရသည်။ ထို့နောက် ကာရနီတောင်ကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်ပြီး ထိုအရပ် ၌ ခြေလက်များကို သံမှိုဖြင့်ရိုက်ခဲ့ကြသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို မြှောက်လျက် ကားစင်ပေါ် တင်ကာ ထားရစ်ခဲ့ကြသည်။ သင့်အပြစ်အတွက် သွေးများယိုဖိတ်ကာ ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ သို့မှ သာ သင်သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်အပြစ်ကိုလွှတ်ရုံသာမက သေခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်စေပါသည်။ ယင်းကို ယုံကြည်လက်ခံရုံဖြင့် အပြစ်မရှိဟု မှတ်ယူ ကြသည်။
သင်အဖြစ်သည် အောက်ပါအ တိုင်းရှိကြောင်း သင့်အားပြသရန် ဟောပြောခြင်းဖြစ်သည်။
“အပြစ်တရား၌အသေဖြစ်၏” ( ကောလော ၂း ၁၃ )
သင့်နေရာ၌ ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားပြုအသေခံခြင်းကသာလျှင် သင့်အပြစ်အလုံးစုံတို့ကို ကိုယ် စားပေးဆပ်နိုင်ပါသည်။ သင့်အပြစ်ကို ချေဖျက်နိုင်သည်။ ခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက် ခြင်းကြောင့် အသစ်သောအသက်တာကိုပေးနိုင်ပါသည်။
“လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အကြောင်းဟောပြောခြင်း” က သင်သည် ကောင်းမှုကုသိုလ် သို့မဟုတ် ဘုရားကျောင်းသို့ ရံဖန်ရံခါ တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင် ကြောင်းကို ပြသသည်။ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါ။ လုံးဝ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အ ကြောင်း ဟောပြောခြင်းက ကယ်တင်ခြင်းအတွက် သင်လုပ်ဆောင်သမျှသော ကုသိုလ် ကောင်းမှုတို့သည် အကျိုးမရှိသည်ကို ပြသသည်။ “လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်းဟောပြော ခြင်း” က သင်လုပ်ဆောင်သည့် ကောင်းသောအရာဟု ခေါ်သမျှကို အမြဲတမ်း ပယ်ဖျက်ပါ သည်။ ထို့အပြင် သင့်အား ကယ်တင်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ သင့်အပြစ်ကို ကိုယ်စားပြုကျေအေးစေနိုင်သည့်အရာမှာ လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ ခရစ်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အရာသာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းမှာ လူ၊ ခရစ်တော်( ဘုရား-လူ ) ပင်ဖြစ်ပြီး သင်လုပ်ဆောင် သောအရာပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိဘဲ သို့မဟုတ် သင့် “ဆုံးဖြတ်ချက်” မလိုဘဲ သင့်အပြစ်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ပါသည်။
သင်သည် ကောင်းသောအရာအချို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု တစ်မိနစ်တောင် မယုံရဲပါ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ ဤကောင်းမှုကုသိုလ်များက သင့်ကို မကယ်တင်ပါ။ ကယ် တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏တပါးတည်းသောသားတော်၊ သုံးပါးတစ်ဆူတွင် ဒုတိယ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ယေရှုခရစ်၏အသေခံခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုယေရှုသည် သင့်အပြစ်အလုံးစုံကို သူ့အပေါ်တင်ကာ လက်ဝါးကားတိုင်၌ သံမှိုဖြင့်ရိုက်ခြင်းကိုခံစဉ်တွင် ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ တမန် တော်ရှင်ပေါလုက အောက်ပါအတိုင်းပြောဆိုစဉ် ထိုအမှုအရာအားလုံးကို ရှင်းလင်းစေပါ သည်။
“ငါတို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင်၊ ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ် မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကို ငါတို့အား ထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ ယခုတွင် အသွေးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက် ပြီးမှ၊ ထိုသခင်အားဖြင့် အပြစ်ငရဲမှ ကယ်ချွတ်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်မည်ဟုသာ မြော်လင့်စရာရှိ၏။” ( ရောမ ၅း ၈-၉ )
သင်သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင် ဘုရားသခင်သည် သင့်ကိုချစ်သည်။ သင်သည် အပြစ်သား ဖြစ်နေစဉ် ခရစ်တော်သည် သင့်အပြစ်အတွက် ပေးဆပ်အသေခံခဲ့သည်။ သင်သည် အပြစ် သားဖြစ်လျက်ပင် သူ့အသွေးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်နိုင်သည်။
သခင်ယေရှု၊ နှိမ့်ချသောစိတ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တိုးဝင်၊
သခင့်ကို ကျွန်ုပ်စောင့်မျှော်၊ ကားတိုင်တော်ခြေရင်းမှာ
ကျွန်ုပ်အားဆေးကြောရင် အသွေးတော်စီးဆင်း ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်မြင်၊
မိုးပွင့်ထက်ဖြူစင်စေမည်၊ ဟုတ်ကဲ့ မိုးပွင့်ထက်ဖြူစင်စေမည်
(“မိုးပွင့်ထက်ဖြူ” James Nicholson, ၁၈၂၈-၁၈၉၆ )
သခင်၊ ကျွန်ုပ်လာသည်၊ ယခုကျွန်ုပ်လာသည်၊
ကာရနီ၌ စီးသော အသွေးတော်ဖြင့်
ယင်းမှာ လက်ဝါးကပ်တိုင် အကြောင်း ဟောပြောခြင်း ြဖစ်သည်။
“အကြောင်းမူကား၊ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌ လက်ဝါးကပ် တိုင်တော်တရားသည် မိုက်သောတရားဖြစ်၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သော ငါတို့၌ ထိုတရားသည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော် ဖြစ်၏။” ( ၁ ကော ၁း ၁၈ )
၂။	ဒုတိယအချက်။ ရှုံးဆုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့အဖို့ လက်ဝါးကပ်တိုင် အ ကြောင်း ဟောပြောခြင်းသည် မိုက်မဲခြင်းတရားဖြစ်ခြင်း၊
“အကြောင်းမူကား၊ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌ လက်ဝါးကပ် တိုင်တော်တရားသည် မိုက်သောတရားဖြစ်၏။”
အခြေပြုကျမ်းကို နောက်တစ်ဖန် နားထောင်ကြည့်ပါ။
“အကြောင်းမူကား၊ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌ လက်ဝါးကပ် တိုင်တော်တရားသည် မိုက်သောတရားဖြစ်၏။…..” ( ၁ ကော ၁း ၁၈ )
“မိုက်မဲခြင်း” ဟူသောစကားလုံးက “အကျိုးမဲ့ပြောဆိုမှု”၊ “အဓိပယ်မဲ့” ဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုအ ကြောင်း ဟောပြောခြင်းကို ကြားနာခြင်းက ခရစ်တော်၏သေခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မှကယ်တင် ခြင်းရမည်ဟူသောပြောဆိုခြင်းသည် မပြောင်းလဲသေးသောသူတို့စိတ်နှလုံး၌ “အကျိုးမဲ့ပြော ဆိုခြင်း” ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့သည် ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားပြုအသေခံခြင်းအ ကြောင်း ဟောပြောရာတွင် အကျိုးမရှိပေ။ မိုက်မဲသောအရာဟု ထင်မှတ်ရသည့်အကြောင်းမှာ ထိုဧဝံဂေလိတရား၌ အကျိုးကျေးဇူးကို မတွေ့ရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုတရားသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်ရာနေရာဖြစ်သည်။ ယေရှုက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် ရောက်လာလျှင်၊ ဒုစရိုက်အပြစ်ကို လောကီ သားတို့အား ထင်ရှားစွာပြတော်မူမည်။” ( ယောဟန် ၁၆း ၈ )
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ထိုသူကို အပြစ်ကိုသိစေ၊ မြင်စေသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ ခရစ်တော်၏အသေခံခြင်းကို သူသည် မြင်နိုင်မည်မဟုတ်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏အပြစ်ကိုမြင်စေခြင်းမတိုင်မှီ လူတစ်ဦးသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်း ဟောပြောခြင်းကို မိုက်မဲခြင်းအဖြစ်သာ မြင်သည်။ ထင်မြင်ယူဆသည်။ “မိုက်မဲခြင်း” ဟု အနက်ပြန်ဆိုသော ဂရိစကားလုံးမှာ “မိုရို့” မှဆင်းသက်လာပြီး ထိုမှ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး “မိုရို” ဆင်းသက်လာသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်း ဟောပြောခြင်းသည် မိုရို၊ မိုက်မဲသောသူ အကြောင်း ပြောဆိုခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး သင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က အပြစ် ကို မမြင်စေသ၍ သင်သည် ပျောက်ဆုံးသောအပြစ်သားသာဖြစ်နေပေမည်။
သို့ဖြစ်၍ သင်သည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဖြစ်ရန် “သင်ယူလေ့လာ” ၍မရပါ။ ကယ် တင်ခြင်းဟူသည် လူ့ဉာဏ်ပညာအားဖြင့် သင်ယူ၍မရပါ။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက အပိုဒ်ငယ် နှစ်ဆယ့်တစ်တွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။
“လောကီသားတို့သည် မိမိတို့ပညာအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို မသိ နိုင်။” ( ၁ ကော ၁း ၂၁ )
ကယ်တင်ခြင်းသည် မည်သို့ပင်ဆိုစေ လူ့ဉာဏ်ပညာအားဖြင့် သင်ယူလေ့လာ၍မရပါ။ စိတ် နှလုံးသားထဲ၌ အလင်းပေးခြင်းရှိရမည်။ သင်သည် မျှော်လင့်ချက်မရှိသော အပြစ်သားဖြစ် ကြောင်းကို ထင်ရှားပြသရမည်။ ထိုသို့မဖြစ်လာသ၍ ဟောပြောခြင်းသည် သင့်ပြဿနာ အတွက် တစ်ခုတည်းသော အဖြေမှာ ခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်၌အသေခံခြင်းသည် မိုရို အကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့် တူသည်ဟု သင့်အားပြောဆိုခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်။ သင့်ကြုံတွေ့ နေရသောပြဿနာမှာ အပြစ်ဖြစ်သည်ကို သင့်အတွင်းစိတ်နှလုံးက လက်ခံထားခြင်းမရှိလျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ ခရစ်တော်အသေခံရခြင်း၏ အရေးကြီးလိုအပ်မှုကို သိမြင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ခရစ်တော်သည် ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည်။” ( ၁ ကော ၁၅း ၃ )
သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား အသေခံခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်း စာက ဤသို့ဆိုသည်။
“ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည် ငါတို့ အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောတော်မူ၏။” ( ၁ ယော ၁း ၇ )
ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သင့်မျက်စိကိုဖွင့်ပေး၍ အပြစ်တရား၏ကျိန် ခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်မည့်နည်းလမ်း အခြားမရှိကြောင်းကို မြင်တွေ့စေခြင်းမရှိသ၍ ပြောဆို ဟောပြောသမျှတို့သည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော သီအိုရီများ၊ လူမိုက်တို့၏ ဆွေးနွေးမှု များအဖြစ်သာ လက်ခံကြမည်။ သင်၏အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောအခြေအနေကို နားလည် သဘောပေါက်မှသာလျှင် သင့်စိတ်နှလုံးထဲမှ သီဆိုချီးမွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်ဝတ်လုံကို ဖြူအောင် ဆေးကြောမူပါ၊
ကာရနီး သိုးသူငယ် အသွေးတော်အားဖြင့်၊
အလုံးစုံ ယေရှုပေးဆပ်ခဲ့ပြီး၊ သူ၌ ကြွေးတင်ပြီ၊
မိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူအောင် သူလေ ဆေးကြောပေးခဲ့။
( “အလုံးစုံ၊ ယေရှုပေးဆပ်ပြီ” Elvina M. Hall, ၁၈၂၀-၁၈၉၉ )
လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်းဟောပြောခြင်းတစ်ခုတည်းကသာ အသင်းတော်ကို ကြီးထွားစေ သည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးအချက်ဆီသို့ ခေါ်ဆောင်လာပါသည်။
၃။	တတိယအချက်၊ ခိုင်မာသောအသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ လက်ဝါးကပ်တိုင်တရား အကြောင်း ဟောပြောခြင်းတစ်ခုတည်းသည် မလုံလောက်ပါ၊
လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အကြောင်းဟောပြောခြင်းသည် အကယ်၍ သင်သည် ကယ် တင်ခြင်းရရှိပြီးသူဖြစ်လျှင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ သင့်ကို အပြစ်မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရန် ခရစ်တော်အသေခံပြီး အသွေးသွန်းလောင်းသည်မှာ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ပေါ်တွင်ပင် ဖြစ် ပါသည်။ သို့ရာတွင် လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အကြောင်း ဟောပြောခြင်းတစ်ခုတည်းက အသင်း တော်ကို အားမကြီးစေနိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်၍သာ ဘုရားသခင်က အသင်းတော်များအား သင်းအုပ် များကိုပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ခရစ်တော်သည် အချို့သောသူတို့ကို …. သင်းအုပ်အရာ၌ ခန့်ထားသည်” ဟု မိန့်မူသည်။ (ဧဖက် ၄း ၁၁) “သင်းအုပ်” ဟု အနက်ဖွင့် ဆိုထားသော ဂရိစကားမှာ ပွိုင်မင်းဖြစ်သည်။ “သိုးထိန်း” ဟု အဓိပယ်ရသည်။ ယေရှုက အချို့ကို သင်းအုပ်၊ ဒေသန္တာရအသင်းတော်ကို အုပ်ချုပ်သူအဖြစ် ဆုကျေးဇူးကို ပေးထားပါ သည်။ သင်းအုပ်ဟူသည်မှာ အသင်းတော်အတွက် ဆုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အသင်း တော်၌ရှိသောလူများသည် သိုးတော်စု၊ သိုးအုပ်များဖြစ်ကြသည်။ သင်းအုပ်သည် အသင်း တော်၏သိုးထိန်းဖြစ်သည်။ သူသည် သိုးတော်စုများကို စောင့်ထိန်းသည်။ အကာအကွယ်ပေး သည်။ လမ်းပြပေးသည်။ လမ်းမမှားရလေအောင် စောင့်ရှောက်ပေးသည်။ ယင်းတို့မှာ သိုး ထိန်းတစ်ဦး၏တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
“သင်းအုပ်အတွက် အခြားဂရိစကားလုံးမှာ အဲပီကော်ပို့စ်ဖြစ်သည်။ “ကြည့်ရှုသူ” ဟု ဆိုလိုသည်။ King James ကျမ်းစာကတော့ “ဘီးရှော့ခ်” ဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “အကြင်သူသည် ဘီရှော့ရာထူးကို တောင့်တလျှင် [ အဲပီကော်ပို့စ်၊ ကြည့်ရှု သူ၊ သင်းအုပ် ] ကောင်းသောအရာကိုတောင့်တ၏” ( ၁ တိ ၃း ၁ ) ဟု မိန့်တော်မူ၏။ သင်း အုပ်သည် အသင်းတော်ကို ကြည့်ရှုသည်။ စောင့်ရှောက်သည်။ ပြုစုပေးသည်။ အသင်းတော် ကို စောင့်ထိန်းပေးသည်။ သူသည် ဆုတောင်းပြီး အသင်းတော်အကြောင်းကိုသာ စဉ်းစား တတ်သည်။ အသင်းတော်အသက်ရှင်လှုပ်ရှားမည့်နည်းလမ်းကို ရှာဖွေသည်။ ပြဿနာ၏အ ရင်းအမြစ်ကိုမြင်သည်။ သင်းအုပ်က အသင်းတော်ကို သူတပါးမမြင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ကြည့်မြင်တတ်သည်။ ဘုရားသခင်၏လမ်းညွှန်မှုကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာကို လည်း သိမြင်သည်။ သင်းအုပ်သည် အသင်းတော်ကို စောင့်ထိန်းသည်၊ ကြည့်ရှုသည်။ အသင်းတော်ရှိလူများကိုလည်း အလေးအနက်ထား စောင့်ရှောက်သည်။ သူတို့သည် မည်သို့ လုပ်ဆောင်အသက်ရှင်နေကြသည်ကိုလည်း မျက်ခြည်မပြတ်လေ့လာသည်။ သူတို့ကြုံတွေ့ နေကြရသော ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများကိုလည်း မြင်သည်။ ဘုရားသခင်၏စောင်မမှုနှင့်အ တူ သူတို့၏ခရစ်ယာန်အသက်တာကို အောင်မြင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ အကူအညီပေးထား သည်။
အသင်းတော်တစ်ပါးသည် ဆုကျေးဇူးရှိသော သင်းအုပ်ဆရာမရှိဘဲ အောင်မြင်မှု မရ နိုင်ပေ။ လုပ်ဆောင်စရာများစွာ ရှိနိုင်သည်။ တွေ့ဆုံမှုတွေလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တနင်္ဂ နွေနေ့၌ လေ့လာသူများကိုလည်း ခေါ်ဆောင်လာနိုင်သည်။ သီချင်းစာရွက်များကိုလည်း ဝေ ပေးနိုင်သည်။ စားသောက်ဖွယ်ရာများလည်း ချပေးနိုင်သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်း ဟောပြောချက်များကိုလည်း ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အကြောင်း ဟော ပြောရုံသက်သက်ဖြင့် အသင်းတော်သည် မကြီးထွားနိုင်ပါ။
ဘုရားသခင်က အသင်းတော်အား အဘယ့်ကြောင့် သင်းအုပ်များပေးထားရသနည်း။ သင်းအုပ်ဆုကျေးဇူးကို ဆုကျေးဇူးစာရင်းထဲ အဘယ့်ကြောင့် ထည့်သွင်းရသနည်း။ တရား ဟောခြင်းတစ်ခုတည်းက ခိုင်မာသောအသင်းတော်ကို တည်ဆောက်နိုင်လျှင် သခင်ဘုရားက သင်းအုပ်ဆရာဆုကျေးဇူးမပေးဘဲ “အချို့ကို ဧဝံဂေလိဆရာ” ကိုသာ အဘယ့်ကြောင့် မပေး သနည်း။ ခိုင်မာသောအသင်းတော်တစ်ခုကို တည်ထောင်ဖို့ ကားတိုင်တော်အကြောင်း ဟော ပြောရုံသက်သက်ဖြင့် မလုံလောက်ကြောင်းကို ခရစ်တော်က သိသည်။ အသင်းတော်က သင်း အုပ်တစ်ပါးလိုအပ်သည်ကိုလည်း သိသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် သူသည် “အချို့တို့ကို … သင်းအုပ်အရာ၌ ခန့်ထားပါသည်။”
အသင်းတော်သည် တရားဟောပြောခြင်းကောင်းသော်လည်း သင်းအုပ်မရှိလျှင် ကျ ဆုံးနိုင်သည်။ အားနည်းလာနိုင်သည်။ ဒုက္ခထဲ ကျရောက်သွားနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မရှင် နိုင်တော့ဘဲ သွေ့ခြောက်သွားနိုင်သည်။ သင်းအုပ်မရှိလျှင် အသင်းတော်၌ရှိသော လူများ သည်လည်း လဲပြိုသွားနိုင်ကြပါသည်။ သူတို့သည် အေးတိအေးစက်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ သူတို့ အသက်တာ၌ အမှားအယွင်းကြီးကြီးမားမားပြုတတ်ကြနိုင်သည်။ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနိုင်ကြပါ သည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။
ပထမဆုံးအနေဖြင့်ပြောရလျှင် ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ရသည့်အကြောင်းမှာ မာရ်နတ်ကြောင့် ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “[ ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ ] အဘယ်သူကိုမြိုရမည်ကို လှည့်လည်ရှာဖွေလျက်ရှိသည်” ( ၁ ပေ ၅း ၈ ) ဟု မိန့်တော်မူသည်။ အဘယ်သူကို မြိုချမည် နည်း။ သိုးများကို မျိုချမည်။ သို့ရာတွင် မာရ်နတ်သည် သူ့အကြောင်းကို မစဉ်းစားလိုပါ။ သင့် အပေါ် ခုန်အုပ်ပြီး စားဖို့သာ စဉ်းစားသည်။ သူသည် သင့်အား မျိုချမည့် မာရ်နတ်ဖြစ်ကြောင်း ကိုပင် သတိပြုမိမည်မဟုတ်။ မာရ်နတ်နှင့်သူ၏အပေါင်းအပါတို့သည် သင်သတိပြုမိသည်ဖြစ် စေ၊ မပြုမိသည်ဖြစ်စေ အပြင်၌သာရှိနေကြပါသည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် လူသားအားလုံးသည် အပြစ်သားများဖြစ်သောကြောင့် ပေ သည်။ အာဒံသည် ဘုရားသခင်၏စကားကို နာမခံသောကြောင့် လူသားအားလုံးသည် အပြစ် သဘာဝဖြင့် မွေးဖွါးလာကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “တယောက်သောသူ ( အာဒံ ) ၏စကား နားမထောင်ခြင်းကြောင့် လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိကြသည်” ( ရောမ ၅း ၁၉ ) ဟု မိန့်မူ သည်။ ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် အပြစ်သဘာဝဖြင့် မွေးဖွါးလာကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ အပြစ်ကျူး လွန်သည်မှာလည်း သဘာဝပင်ဖြစ်ပါသည်။ အမှားအယွင်းပြုမိသည်မှာလည်း သဘာဝပင် ဖြစ်ပါသည်။ Murphy ၏တရားဥပဒေက “တစ်ခုခုမှားယွင်းလျှင်၊ ယင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်” ဟု ဆိုသည်။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် သူ့အလိုအလျောက် အကောင်း မဖြစ်လာနိုင်ကြ ပါ။ မှားယွင်းနိုင်သည်။ ကုန်းဆင်းသွားနိုင်သည်။ လူတို့သည်လည်း ခိုင်မာသောခရစ်ယာန်အ ဖြစ်သို့ရောက်ရန် သူ့အလိုလိုဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ လဲပြိုသွားနိုင်ပါသည်။ အေးတိအေးစက်ဖြစ်သွား နိုင်ပါသည်။ အမှားကို ကျူးလွန်နိုင်ကြသည်။ သူတို့အမှား တကယ် ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ ထို သို့အမှားအယွင်းကျူးလွန်ရန် သင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ အလိုအလျောက်ဖြစ်လာ နိုင်ပါသည်။ အသင်းတော်များသည်လည်း အလိုအလျောက် မကြီးထွားလာနိုင်ပါ။ အားနည်း လာနိုင်ကြပါသည်။ ဒုက္ခထဲလည်း ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ လွယ်လင့်တကူ ကျရောက်နိုင်ပါ သည်။ ထိုသို့အားနည်းချက်များဖြစ်လာစေရန် တစ်ခုခု လုပ်ဆောင်နေစရာပင်မလိုအပ်ပါ။ အ လိုအလျောက်ဖြစ်လာမည်။ တကယ်လည်း ဖြစ်လာပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အသင်းတော်က သင်း အုပ်ဆရာတစ်ပါးကို လိုအပ်သည်။ ခရစ်တော်သည် “အချို့တို့ကို …သင်းအုပ်အရာ၌ ခန့်ထား တော်မူသည်။” ထိုသို့လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်တော်အသင်းတော်၏ သင်းအုပ်ဆရာမှာ ဒေါက်တာ Hymers ဖြစ်သည်။ သူ သည် အမှုတော်ထဲ၌ရှိနေသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်မကဖြစ်သည်။ ရာပေါင်းများစွာ သော လူတို့ကို ခရစ်တော်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်သည် သူ့အား အသုံးပြုပါသည်။ သူ သည် လူများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အကြံဉာဏ်ပေးထားသည်။ လူတို့ကို အထူးဂရုစိုက်ပြုစုပါ သည်။ လူတို့ကို ကူညီဖေးမပေးသည်။ ဒေါက်တာ Hymers သည် အသင်းတော်နှစ်ပါးကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေသောအချိန်၌ သူက စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်အသင်းတော်ကွဲပြားမှုတွင်လည်း အသင်း တော်ကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ အသင်းတော်ကို တည်ထောင်ဖို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့၊ ကာ ကွယ်ဖို့၊ ထိန်းသိမ်းဖို့ ဘုရားသခင်က သူ့ကိုပေးထားသည်။ ဒေါက်တာ Hymers သည် သင်း အုပ်ဆရာတစ်ပါး သက်သက်မဟုတ်။ ထူးချွန်ထက်မြက်သော သင်းအုပ်ဆရာတစ်ပါးဖြစ်ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာ Hymers အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင် ပါသည်။
သင်ကော မည်သို့နည်း။ သင်တို့သည် သင်းအုပ်များ မဟုတ်ကြပါ။ သို့သော် သူ့ကို အကူအညီပေးနိုင်ကြပါသည်။ မှားယွင်းသောအရာ တစ်ခုခုတွေ့လျှင် သူ့အား ပြောပြနိုင်ပါ သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ သင်းထောက်နှင့်ခေါင်းဆောင် များအတွက် မှန်ကန်သောအရာဖြစ်သည်။ သင်တို့သည် ဤနေရာ၌ရှိနေခြင်းမှာ သင်းအုပ်ဆ ရာကို အကူအညီပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဒီတိုင်းလွှတ်မထားပါနှင့်။ သင်းအုပ်က အားလုံးသိသည်ဟု လည်း မထင်ပါနှင့်။ မှားယွင်းသည်ဟု မြင်သောအခါ သို့မဟုတ် ကြားသောအခါ သင်းအုပ် ဆရာကို ပြောပြပါ။
သင်တို့တွင် အချို့သည် ခရစ်ယာန်မဟုတ်ကြပေ။ ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိ ကြပေ။ သင့်တို့ကျူးလွန်သောအပြစ်များကို ယေရှုအသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်းမရှိကြ။ သင်တို့ကော မည်သို့နည်း။ သင်တို့သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန် လို အပ်ပါသည်။ သူသည် သင့်အပြစ်အတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေခံခဲ့သည်။ သင့်အပြစ် ကိုဆေးကြောရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့သည်။ သင့်အား အသက်ကိုပေး ရန် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုကိုးစားခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန် တော်တို့နှင့်ပြောဆိုဆွေးနွေးလိုလျှင် အခြားသူများသည် အပေါ်ထပ်၌ နေ့လည်စာ စား သောက်နေကြစဉ် ပထမရှေ့နှစ်ခုံသို့ လာကြပါ။ အာမင်။
“အသေခံသောသူ၏အသွေးဖြင့် ကယ်တင်၊” (S. J. Henderson, ၁၉၀၂ ရေးစပ်သည်။ )
တရားဒေသနာကို ဒေါက်တာ R. L. Hymers, Jr. က ရေးသား
ပြီး Rev. John Samuel Cagan က ဟောပြောသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌ လက် ဝါးကပ်တိုင်တော်တရားသည် မိုက်သောတရားဖြစ်၏။ ကယ် တင်ခြင်းသို့ရောက်သောငါတို့၌ ထိုတရားသည် ဘုရားသခင် ၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။” ( ၁ ကော ၁း ၁၈ )
၁ ကော ၁း ၁၈က၊ ကောလော ၂း ၁၃၊ ရောမ ၅း ၈-၉။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ရှုံးဆုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့အဖို့ လက်ဝါးကပ်တိုင် အကြောင်း ဟောပြောခြင်းသည် မိုက်မဲခြင်းတရားဖြစ်ခြင်း။ ၁ ကော ၁း ၁၈ခ၊ ယောဟန်န ၁၆း ၈၊ ၁ ကော ၁း ၂၁၊ ၁၅း ၃၊ ၁ ယော ၁း ၇။
၃။	တတိယအချက်၊ ခိုင်မာသောအသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ လက်ဝါးကပ်တိုင် တရားအကြောင်း ဟောပြောခြင်းတစ်ခုတည်းသည် မလုံလောက်ပါ။ ဧဖက် ၄း ၁၁၊ ၁ တိ ၃း ၁၊ ၁ ပေတရု ၅း ၈၊ ရောမ ၅း ၁၉။